दूध दिइरहेको भैंसी ब्याएपछि …! - Sero Fero News
दूध दिइरहेको भैंसी ब्याएपछि …!
नवलपुर, असार १८
पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका-४ हसौरामा दूध दिइरहेको भैंसी ब्याएपछि किसान अचम्मित भएका छन् । हसौराका किसान रमाकान्त चापागाईँको भैंसी शुक्रबार बिहान ब्याएको छ, जसले बिहीबारसम्म दूध दिएको थियो ।
भैंसी मालिक चापागाईंले भैँसीले दूध घटाउला र दुहुन छोड्नु पर्ला भन्दा भन्दै भैंसी ब्याएको बताए । उनका अनुसार गत वैशाखमा दूध घटेको थियो, तर पुनस् पग्रिएर धेरै दूध दिन थालेपछि दुहुन छोडेनन् ।
पशु चिकित्सकका अनुसार सामान्यतया भैंसीले एक बेतमा ६ महीनासम्म दूध दिनसक्छ । भैंसीको जात अनुसार केही महीना तलमाथि हुनसक्छ ।
डाक्टर पौडेलका अनुसार चापागाईंको भैंसी मुर्रा क्रस हो । यसले ६ महीनामा एक हजार ८०० लिटरसम्म दूध दिन्छ । उन्नत जातका गाईंले यसरी निरन्तर दूध दिने गरेका घटना भए पनि भैंसीले यसरी दूध दिनु दुर्लभ भएको डाक्टर पौडेलले बताए । ‘उन्नत जातका गाईंमा यस्तो हुन्छ तर भैंसीमा यो दुर्लभ नै हो, ‘उनले भने, जेनेटिक कारणले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ ।’ स्राेतः अनलाइनखबर